Inkqubo entsha yezomthetho eApple: Spotify ubatyhola ngokuxhatshazwa kwamandla | Ndisuka mac
Inkqubo entsha yezomthetho eApple: U-Spotify ubatyhola ngokusetyenziswa gwenxa kwamandla
Siyayazi loo nto ngenxa yobume bolawulo lwamashishini onjengeApple okanye Uphando, Iinkampani ezikwicandelo elinobungakanani obuthobekileyo ngamanye amaxesha zinokwenzakaliswa ziinkampani ezinkulu. Kwileta ethunyelwe eBrussels, Spotify ikhalazile ngokusesikweni kwiKhomishini ye-European Union malunga nokusetyenziswa gwenxa kwamandla iinkampani ezinje ngeApple okanye Uphando Ukuziqhelanisa nezinye iinkampani zeli candelo.
Nangona ayisosityholo sodwa nguSpotify, kuba le leta isayiniwe ziinkampani ezininzi, ezinje I-Deezer okanye i-Intanethi yeRocket, inkampani ukuvelisa umculo yeyona yaziwa phakathi kwabo bonke. Ingxelo, yaziswa ngu Financial Times, ityhila isidingo semithetho ethile "elawula unxibelelwano phakathi kwabadlali abohlukeneyo kumdlalo."
Ileta ethunyelweyo libango lohlobo oluthile lommiselo malunga noku, ukunqanda ukusetyenziswa gwenxa kwamandla kunye nokhuphiswano olungenabulungisa. Isikhalazo sihamba ngokubanzi ngokuchasene nayo nayiphi na inkampani yenkqubo yokusebenza kunye neenjini zokukhangela, kunye neemarike zesicelo (ubukhulu becala iApple kunye noGoogle, ngenxa yale nkcazo).
Kuyabonakala ukuba i-European Union sele icinga ngale a umgaqo omtsha ovumela ukhuphiswano olulinganayo phakathi kweenkampani ezinkulu nezincinci. Kodwa akubonakali ngathi le ngxaki izakuba neziphumo ezilula. Umahluko phakathi kweSpotify kunye neApple ubonakala kudala ngaphambi kokuba iApple ikhuphe iApple Music, ngaphezulu konyaka odlulileyo.
Njengoko sele sisazi, olu hlobo lwengxaki yezomthetho eApple yinto esiyiqhelile. Siza kubona ukuba ekugqibeleni iSpotify, iDeezer kunye nezinye iinkampani zifumana umgaqo Phambi kweemfuno zabo kuhambo oludla bodwa njengezo zikhankanyiweyo ngaphambili
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Inkqubo entsha yezomthetho eApple: U-Spotify ubatyhola ngokusetyenziswa gwenxa kwamandla
I-Multiscreen Multimouse isivumela ukuba senze isikhombisi semouse kuhlolo ngalunye
Unonophelo lweSikhangeli kunye neKhaya eliPhila le-3D Pro, kwintengiso yexesha elincinci